Maqaal – Dalmarayaal u safra sidii dal-xiisayaal kase duwan! | Radio Himilo
Home / MAQAALO / Maqaal – Dalmarayaal u safra sidii dal-xiisayaal kase duwan!
Posted by: radio himilo August 6, 2017
Muqdisho – Qofi waxa uu laabta ku beegto cidi ma ogaato balse kol baa sida kaah iftiin loo arkaa waase goortuu kadin ka helo wixii ku keydsanaa. Biyuhuba kolkay karaarada ka kormaraan ayaa laga kurboodaa, kulamana laga yeeshaa iska moosidooda inta ka horreysa warba looma hayo. Dheriguna kolkuu kululaaduu karkaraa, markaas ayuu isna qooraansi kasbadaa, laguna ridaa cuuudkii la cuni lahaa caynkuu ahaadaba
Previous: Bernardo Silva: “Waan jeclaan lahaa in Kylian Mbappe uu yimaado Manchester City.”
Next: Maqal:- Casharka Tafsiirka Qur’aanka Idaacadda Himilo “Darsiga 61aad”